Ikhodi Yephutha le-GeForce Experience 0x0003 - Ungayilungisa Kanjani - Ungakwenza Kanjani
Isipiliyoni seGeforce yi-suite yesoftware esiza bonke abanikazi bekhadi lemidwebo yeNvidia.Iphakethe lesoftware likulethela konke okuphathelene nehluzo. Kuyinto enhle kakhulu ekuphatheni ukusetshenziswa kwekhadi lakho.Ihadiweware idinga isoftware ukugcina impilo nokusebenza kwayo kufanelekile. Abashayeli akubona kuphela ukufakwa okudingayo kulezi zinsuku.
Isoftware yeGeForce Experience iletha izinzuzo ezahlukahlukene etafuleni. Ikhodi yephutha 0x0003 yinkinga ejwayelekile ebikwa abasebenzisi abaningi abasha. Kungaba nzima ekusebenzeni kwakho okushelelayo kumadivayisi akho. Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngokuningiliziwe ngalolu daba.
Yini ikhodi yephutha le-GeForce Experience 0x0003?
Ikhodi yephutha izoba kwizibonisi zakho lapho uhlelo lokusebenza lwesipiliyoni se-Geforce lungasebenzi. Abanye abasebenzisi bangabhekana nephutha le-0x0001 esikhundleni salokho. Inkinga ingavela kwinqubo yokuqala. Okuhlangenwe nakho kweGeforce akuyona ukulanda okuyimpoqo kepha kuletha ezinye izici etafuleni.
Abadlali abaningi bamageyimu nabadali bevidiyo bakuthola kuyinsizakalo okufanele ube nayo. Iphutha likutshela ukuthi “Kukhona okungahambanga kahle; zama ukuqala kabusha i-PC yakho. ” Kuyisimo esivamile esingaholela ezinkingeni eziningi. Sethemba ukuthi singayixazulula le nkinga ngokukhomba imbangela.
Ungayilungisa kanjani ikhodi yephutha le-GeForce Experience 0x0003?
Kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene ongazilungisa le nkinga. Kulesi siqondisi, sizoxoxa ngezinyathelo ezizokwenza inqubo ibe lula kuwe. Kunezixazululo ezahlukahlukene ongazizama. Izinkinga eziningi zingakulethela izingqinamba ngenxa yale nkundla. Nazi ezinye izindlela ongazisebenzisa ukulungisa le khodi yephutha le-Geforce 0x0003.
Phoqelela Ukumisa Isicelo:
Ukuphoqa ukuphoqa yisixazululo sokwenziwe kule nkinga. Abasebenzisi bangasebenzisa kalula le hack ukuxazulula inkinga ngokushesha. Nazi izinyathelo zokwenza okufanayo.
1.Qala umphathi womsebenzi
Abasebenzisi bangaqala uhlelo lomphathi womsebenzi kumakhompyutha abo. Kuyasebenza impela ukuthola zonke izinqubo ezisebenzayo. Ungasebenzisa isinqamuleli sekhibhodi se-ctrl + shift + esc ukuqala umphathi wemisebenzi. Ngenye indlela, ungachofoza kwesokudla kubha yomsebenzi ukuze ulethe izinketho.
2. Qeda inqubo yesipiliyoni se-Geforce
Kuzinqubo zemenenja yemisebenzi, kufanele ubheke isipiliyoni seGeforce. Lapho isebenza ngemuva, ungathola izinqubo ngokuskrolela phansi kohlu. Khetha inqubo bese uchofoza kunketho yokugcina yomsebenzi. Itholakala ezansi kwesokudla kwesikrini.
Kuyamangalisa! Manje ungamisa kalula uhlelo lokusebenza lwesipiliyoni se-Geforce. Ngiyethemba, kulokhu, ngeke ubhekane nenkinga yokuyisebenzisa kukhompyutha yakho. Abasebenzisi bangayisebenzisa ngamalungelo okuphatha.
2. Isiqukathi seNvidia Telemetry
UNvidia unensizakalo yocingo olutholakala endaweni yesikhulumi. Kuyisidingo sabo bonke abasebenzisi bekhadi lemidwebo. Uma insiza ingasebenzi kukhompyutha yakho, khona-ke kunenkinga yangaphakathi. Inkinga ingalungiswa kalula nge-hack encane. Nazi izinyathelo ngesandla ukuqala inqubo kudivayisi yakho.
Kufanele uvakashele inketho yokuqalisa kudivayisi yakho yewindows. Abasebenzisi bangacindezela ukhiye weWindows + R ukuyiqala kumakhompyutha abo.Izovula inketho yokugijima kalula. Ungathayipha umyalo wezinsizakalo.msc lapha.
Abasebenzisi bangachofoza inketho yeNvidia Telemetry ukuze uyiqale. Iqukethe izinketho zeziqukathi zeNvidia Display kwikhompyutha yakho.
Ungaqala kabusha ngamandla insiza ngokusebenza kwayo okubushelelezi. Khetha inketho bese uchofoza ukuqala kabusha. Isikrini se-PC singacwazimula kancane kepha sisebenze ngokushelela phakathi nesikhathi esithile.
Kuyamangalisa! Kungokunye futhi ukulungiswa okulula nokusheshayo kwekhodi yephutha lesipiliyoni seGeForce 0x0003.
3. Buyekeza Abashayeli
Abashayeli beNvidia badlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuthi ungathola uhlelo lokusebenza luqale ukusebenza. Lapho idivayisi yakho ingemuva kokubuyekezwa, kungaba nezinkinga zokusebenza nezesoftware. Nazi izinyathelo zokuvuselela ngesandla abashayeli kukhompyutha yakho.
Kufanele uvakashele iwebhusayithi yeNvidia kwikhompyutha yakho. Abasebenzisi bangakwazi chofoza kulesi sixhumanisi .
Kuzokusa ekhasini lokufaka umshayeli mathupha. Khetha ikhadi lemifanekiso elisebenzisa ukubonisa kwakho. Kukhona uhlu lwawo wonke amakhadi wehluzo asemthethweni we-Nvidia akhona lapha.
Ungalanda umdlalo weGeforce, abashayeli abalungele, kusuka kule nkundla. Chofoza inkinobho yokulanda ukuze uthole abashayeli kudivayisi yakho. Ukusetha kuzophinda kucele ukufakwa kwe-Geforce Experience. Abasebenzisi ababhekene nanoma yiziphi izingqinamba bangasebenzisa lokhu kusetha ukulungisa isoftware.
Ukuvuselelwa kungaxazulula inkinga kalula. Sincoma ukuthi usebenzise leplatifomu ukugcina ikhadi lakho lemidwebo liphilile.
4. Izinkinga zeWindows
Kwesinye isikhathi umshini wakho weWindows nawo ungaba imbangela yenkinga. Abaningi bethu bavame ukugwema ukuthola ukufakwa kwesibuyekezo. Isoftware ingazilanda ngokuzenzakalela, kepha sigcina seqa inqubo yokuqalisa kabusha. Uma lokhu kuqhubeka kwenzeka isikhathi eside, ungahlangabezana nemiphumela emibi kakhulu.
Isixazululo esilula ukulanda nokufaka isibuyekezo kwikhompyutha yakho. Abasebenzisi bangachofoza kuzilungiselelo ukuze bahlole uma ngabe kukhona izibuyekezo ezilindile. Isikrini sasekhaya kuthebhu yezilungiselelo sizokukhombisa ukuthi ungasigcina sisebenza kanjani.
5. Setha kabusha Inethiwekhi
Izinkinga zenethiwekhi zikhathaza kakhulu abasebenzisi abaningi. Kubalulekile ukuxazulula le nkinga yenethiwekhi ukuze ifinyeleleke kalula. Nayi inkomba yethu yokuthi ungayisetha kanjani kabusha inethiwekhi kwikhompyutha yakho. Izinyathelo zimi kanje -
Abasebenzisi kufanele basebenzise umyalo we-oda ukuqala ukusebenza kunqubo yokusetha kabusha. Abasebenzisi bangaqala uhlelo lwe-CMD ngokusesha kunketho yokuqala. Kufanele uyiqhube ngemodi yomlawuli.
Abasebenzisi bangasetha kabusha inethiwekhi yabo endaweni yesikhulumi ngokuthayipha lo myalo - ukusetha kabusha kwe-netsh Winsock. Izosetha kabusha ngokuphelele zonke izilungiselelo zakho. Abasebenzisi kufanele bafake amaphasiwedi e-WiFi nenye idatha kusuka ekuqaleni.
Manje usungazama ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwesipiliyoni seGeforce futhi.
Sixoxa ngokunye kokulungiswa okulula kokusebenzisa leplatifomu. Abasebenzisi bangazama lokhu futhi bathole imiphumela emihle kakhulu. Kunezisombululo ezahlukahlukene zokuxazulula inkinga ejwayelekile. Ikhodi yephutha lesipiliyoni se-Geforce 0x0003 yinto ejwayelekile. Lokhu bekungukulungiswa konke ebesikwazi ukukwenza, ukufingqa ngale ndatshana. Zizame futhi usazise ukuthi yisiphi isixazululo sakho.